Nesimba Munamato Pfungwa Kuti Uguritse Nyoka Uye Scorpions. | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Nesimba Munamato Pfungwa Kuti Uguritse Nyoka Uye Scorpions.
Nesimba Munamato Pfungwa Kuti Uguritse Nyoka Uye Scorpions.
Ruka 10:19 Tarisai, ini ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, nepamusoro pesimba rese remuvengi, uye hapana chingatongokukuvadzai.
Wese mutendi akapihwa masimba ehumwari pamusoro pemadhimoni ese. Semwana waMwari iwe unofanirwa kunzwisisa kuti dhiabhori haisi dambudziko rako muhupenyu. Iwe wakazvarwa naMwari, saka iwe uri mukuru kuna Dhiabhori nezvose zvake umambo hwerima. Nhasi tichave tichiita nhanho dzekunamatira zvine simba kupwanya nyoka nenyoka. Iyi minamato yeminamato inozovhura maziso ako kuzviremera izvo zvatakapiwa naMwari muna Kristu Jesu. Kana iwe uchinge wapedza kuverenga chinyorwa ichi, iwe ucharega kutiza kubva kuna dhiabhori uye wotanga kutevera dhiabhori. Kutya kuchanyangarika kubva kuhupenyu hwako zvachose. Nguva yako yekutonga pamusoro pa satan nevamiriri vake vese vevanhu ichatanga. Ndinokukurudzira kuti uvhure mwoyo wako paunenge uchienda muchidimbu ichi, unozokunda muzita raJesu Kristu.
Chii Chinyoka Uye Scorpions?
Nyoka nezvinyavada ndiye dhiabhori uye nemweya yakaipa yedhimoni. MunaRuka 10:19, Jesu Kristu akataura madhimoni senyoka uye nezvinyavada. Dhiyabhorosi inonzi inyoka huru, ndosaka madhimoni ake achinziwo senyoka nezvinyavada. Zvakare murume wese akaipa kana mukadzi anotsvaga kukuwira kwako zvakare inyoka nechinyavada. Wese munhu akaipa mumiriri anorwira iwe mumhuri yako, nzvimbo yebasa, bhizinesi nzvimbo zvakare inyoka kana chinyavada. Nhau dzakanaka ndedzekuti Mwari akakupa simba rekuvapwanya vese. Kuti uvaise pane izvo zviri pasi petsoka dzako. Asi nei Jesu Kristu akashandisa senyoka nezvinyavada kureva madhimoni? Isu tinoziva kuti magwaro akafuridzirwa neMweya Mutsvene, uye Mwari haaite kuenzanisa kwakajairika mubhaibheri. Kuti Jesu ashandise nyoka nenyoka, kureva madhimoni, panofanirwa kuve nehumwe hunhu uye hunhu hwezvisikwa izvi zvinowanikwa mumadhimoni. Ngatitarisei zvimwe zvacho.
Hunhu hweNyoka nezvinyavada
1. Uturu: Nyoka nehonye zviri zviviri zvisikwa zvine chepfu.Puti cheputi chinouraya chinogona kuuraya munhu wacho. Mumufananidzo wemweya chepfu inomiririra zvakashata zvakaiswa muhomwe. Madhimoni ane chepfu zvakare, ane mukana wekuisa yakaipa mumweya yakaipa muhupenyu hweavo akavabirwa. Vanhu vazhinji nhasi, kunyangwe vatendi vari kurwara nehushebu dzakaipa kana chepfu yemweya, vamwe vakatofa nekuda kwedambudziko rechidhimoni iri. Asi semwana waMwari, iwe haugone, Jesu Kirisito akati, iwe uchanotora nyoka, uye kunyangwe Dhiyabhori paakadyara muchetura mumweya muhupenyu hwako, hazvizokukuvadza. Mako 16: 17-18.
2. Zvisinganyatsooneki: Nyoka nezvinyavada zvisikwa zvakangwara uye zvine manomano. Kana usiri akanatsa pane zvomweya, haungambovaone vachiuya. Dhiyabhorosi munyengeri uye munyengeri saka nemadhimoni akewo. Dhiyabhorosi akanyengedza Adamu naEva mubindu ndokutora simba pamusoro pevanhu semugumisiro, Jesu paakasvika kudzoreredza iro simba kumunhu, akaedzawo kunyengedza Jesu asi iye akatadza, nekuti Jesu aive nehungwaru uye akasvinura. Sevatendi, tinofanirwa kuve takarinda, kwete zvese izvo zvinozunza goridhe, hatifanire kurega kurinda kwedu, tipe nzvimbo kuna dhiabhori uye iye achabetserwa kukurwisa.
3. Chisimba uye chinogumbura: Nyoka netsiva zvisikwa zvine chisimba uye zvinogumbura. Madhimoni zvakare ane chisimba muchisikigo, haasi kunyemwerera, ari kunze kuba, kuuraya nekuparadza. Kana iwe ukavakunda iwewewo unofanira kuve muKristu wechisimba. ts chete chisimba chinozvitora nechisimba. Hupenyu haufarire vanyoro uye vasingakuvadzi, unongofarira chete vane hushingi uye nechisimba. Shumba iri mauri inofanira kuuya iri mupenyu. chero ukaramba uchizvidzivirira, Dhiyabhorosi anoramba achikurwisa, asi kana ukangogumbukira uye kurwisa Dhiyabhorosi, achakutiza. Jakobho 4: 7.
4. Ivo Vanogona Kugumburwa: Nyoka nezvinyavada zvinogona kupwanywa, zvakare madhimoni anogona kupwanywa. Jesu vakatipa simba rekutswanya dhimoni roga roga rinouya kutirwisa. Dhiyabhori haichisiri chinhu, iwe senge uri mukristu, uri pamusoro kuna dhiabhori. Pese paunouya Dhiabhori kuzokurwisa, iwe unomupwanya muzita raJesu Kristu. Mumwe anogona kubvunza, ndinoita sei ndichipwanya zinyoka netsiva semutendi. tichave tichiongorora izvo munguva pfupi.
Maitiro Ekupwanya Nyoka Uye Scorpions
Pane nzira nhatu dzekupwanya Nyoka ne scorpion, iro izwi, kutenda uye munamato. Ngatitarisei kwavari mumwe mushure meimwe:
1. Shoko: The izwi raMwari Kuda kwaMwari, uye kuda kwaMwari, ndangariro dzaMwari. Izwi raMwari rinotsigirwa pamwe nekuvimbika kwaMwari. Izvi zvinoreva kuti chero zvataurwa neshoko, hapana dhiabhori anogona kuzviramba. Kana iwe uchida kuraira simba pamusoro dhiabhori uye vamiririri vake, iwe unofanirwa kuve mudzidzi weshoko. Iwe unofanirwa kudzidza izwi raMwari, uye kuritendera, kugara mukati mako zvakanaka. Jesu aive azere neshoko, kutaura kuti Iye iShoko raMwari rakaratidzwa. Dhiabhori paakauya kuzomuedza mugwenga, Akadzivisa Dhiyabhu kuburikidza neshoko raMwari, Mateo 4:10. Wese mutendi azere neshoko raMwari, haagoni kuve munyatwa wa satan.
2. Kutenda: Pasina kutenda, haugone kuratidza simba raMwari. Pasina kutenda, haugone kukurira masimba erima.Faith kuvimba nekuvimbika kuna Mwari kubudikidza neshoko rake. Kana iwe uchivimba uye uchivimba naMwari, hapana dhiabhori anokukunda iwe. Jesu Kirisito aive azere nekutenda, ndosaka Akunda dhimoni rese rakauya nenzira Yake. Chero bedzi chako kutenda iri munzvimbo, iwe uchakunda dhimoni hwese hunouya nenzira yako.
3. Munamato:Kuburikidza neminamato tinopa kutonga pamusoro poushe hwerima. Simba riri mushoko raMwari uye nekutenda kwedu kuri kuratidzwa kuburikidza neatari yeminamato. Kuburikidza neminamato, unogona kuraira mauto egehena kuti apfugame patsoka dzako. Iwe unosunungura simba rese rinorwisa uchirwa nekwaunoda. Mukristu asinganamate anogara achiitirwa dhiabhori. Vakristu chete avo vasinganamate, vanopedzisira vabatwa sevabambi kuna dhiabhori. Ini ndanyora mimwe minamato ine simba yekunamatira kupwanya nyoka nenyoka nhasi. Zvino zvawava neruzivo, ita minamato iyi mukutenda uye dzorera zvishamiso zvako ipapo muna Jesu Kristu zita.
1. Baba ndinokutendai nekuda kwesimba rese riri renyu munaJesu Kristu
2. Baba ndinouya neushingi kuchigaro chenyu chenyasha kuzotora ngoni nenyasha muna Jesu Kirisito zita
3. Iwe meso akashata anotarisisa mafambiro angu, ndinokuraira kuti uende kunopofumara munaJesu Kristu Muzita
4. Dhimoni rega rega rakamira pandiri rinofanira kurohwa muzita raJesu Kristu
5. Ini ndinosunungura matambudziko akakwana pese paroah achirwira kupinduka kwangu muzita raJesu Kristu
6. Dhimoni rega rega rinopesana neshoko raMwari muhupenyu hwangu, riparadzwe muZita raJesu Kristu
7. Ini ndinopaza hurongwa hweedhimoni roga roga rinopokana neni muZita raJesu Kristu
8. Ini ndinoraira museve wese wenhamo wakanangana nehupenyu hwangu kuti udzokere kuna iye anotumira muna Jesu Kirisito zita
9. Muti wese wekutambudzika uchikura mune rangu rekusimudzwa uye upiswe nemoto munaJesu Kristu Muzita
10. Dhimoni roga roga rinouya kuuraya kuba nekuparadza muhupenyu hwangu riparadzwe izvozvi muZita raJesu Kristu
11. Wese madhimoni anoitirwa munhu anodhonzwa kuti andidonhedze, kuwa pasi uye kufira muZita raJesu Kristu
12. Chero chibvumirano cheupenyu hwakaomeswa ngachiparadzwe muZita raJesu Kristu
13. Wese mweya wenyoka unoshanda uchirwisa hupenyu hwangu, ngauparadzwe muzita raJesu Kristu
14. Chese chakaipa chakaiswa muhupenyu hwangu chiburirwe kunze neropa raJesu Kristu.
15. Kutambudzika kwese kwakanangana nekubuda kwangu kunofanira kuve kwakave kubviswa muZita raJesu Kristu
16. Dhimoni rega rega rinokonzera kurwara nezvirwere muhupenyu hwangu, ngariparadzwe muZita raJesu Kristu
17. Dhimoni rega rega rehurombo muhupenyu hwangu, riparadzwe muzita raJesu Kristu
18. Chero inzwi ripi neripi rakaipa rinotaura zvinopesana nehupenyu hwangu, riparadzwe muJesu Kristu Muzita
19. Kuita kwega kwevaroyi nevaroyi muhupenyu hwangu ngauparadzwe zvino muZita raJesu Kristu
20. Ini ndinopwanya nyoka dzese nezvinyavada zvinouya kuzorwa neni ikozvino muna Jesu Kristu zita
21. Ini ndinosunungura vatumwa vanorwa kuti vaparadze zvirongwa zvemuvengi zvinopesana nehupenyu hwangu munaJesu Kristu
22. Ini ndinoparidza kuti handikundiki muZita raJesu Kristu
23. Ini ndinoparidza kuti ini handigoni kuzadzikiswa munaJesu Kristu Muzita
24. Ini ndinotaura masimba angu ese akatenderwa pamusoro pemadhimoni ose muzita raJesu Kristu
25. Ini ndinoramba upofu hwomweya muna Jesu Kirisito zita
26. Kubva nhasi, ndichafamba ndichifarira sese yezita raJesu Kristu
27. Vese vacharwa neni gore rino vachaparadzwa muna Jesu Kristu zita
28. Ini ndinosunungura madhimoni ega ega emunhu akagara pane yangu mutongo muna Jesu Kristu zita
29. Ini ndinoparidza kuti ndakakomborerwa munaJesu Kristu zita
30. Tinokutendai Jesu.
Previous nyayaMaitiro Ekutaura Munamato Unobudirira
inoteveraNdinoziva Sei Kana Munyengetero Wangu Unopindurwa?
Crente Nyamavhuvhu 17, 2021 Na 6:42 pm
Munamato Wekubudirira muna 2021
Kunamatira kweuchenjeri Nemavhesi eBhaibheri